Solskjaer Iyo Murtough Oo Soo Saaray Liiska Lixda Daafac Ee Kooxda Man United Xiiseeneyso.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Solskjaer iyo Murtough oo soo saaray Liiska lixda daafac ee kooxda Man...
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer iyo agaasimaha kubada cagta John Murtough ayaa lagu soo waramayaa inay aqoonsadeen lix daafac dhexe oo diirada u saaran suuqa kala iibsiga xagaaga.
Inkastoo weeraryahan cusub uu muhiimad weyn u yeelan doono kooxda hadii Edinson Cavani uu baxo ka dib hal xilli ciyaareed, United ayaa la filayaa inay raadsato xidig caawiya Harry Maguire .
Iyadoo mustaqbalka Eric Bailly iyo Phil Jones ay labadoodaba mugdi kujiraan hubaal la’aan, Red Devils ayaa lala xiriiriyay magacyo badan si ay u xoojiso dookhyadooda difaac ee ololaha 2021-22, sida kabtanka Real Madrid Sergio Ramos .
Sikastaba, 34-sano jirkaan ayaan kasoo muuqan lixda nin ee u sharaxan Eurosport , kuwaasoo sheegaya in Raphael Varane , Pau Torres , Jules Kounde iyo Ibrahima Konate ay dhamaantood diirada u saaran yihiin Red Devils.
Labada magac ee kale ee ku jira liiska la sheegayo ee Man United lama shaacin, laakiin labadoodaba waxay u muuqdaan inay bartilmaameedyo halis ah u yihiin kooxda marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga.
Warar soo baxayay bishii la soo dhaafay ayaa sheegayay in Liverpool ay taabashada ugu dambeysa heshiis la galeyso heshiiska Konate, laakiin RB Leipzig ayaa loo maleynayaa inay ku wargelisay Reds inaysan raadin doonin heshiiska ciyaaryahanka reer France.
Previous articleLiverpool, iyo Chelsea oo ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch
Next articleManchester United oo guul ka gaartay Granada, iyo Arsenal oo bar-baro lagu qabtay UEFA Europe League